ထုတ်ကုန်များ > 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 796600-15-2 အမျိုးအစား: သည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများ
ဒါဟာကြီးမားတဲ့ပမာဏဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှကြွလာသောအခါသင်က Apicmo ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်, ဤ 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile ပါဝင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေး ပတ်သက်. CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသေချာအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားကြသည်။
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2) ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်
CAS Registry ကိုနံပါတ် 796600-15-2
မော်လီကျူးအလေးချိန် 169.583 g / mol
ပေါက်ကွဲလုနီးပါး 96.3 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 111
IUPAC name ကို 2-chloro-4-fluoro-3-methylaniline
အတိအကျအစုလိုက်အပြုံလိုက် 169.009 g / mol
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် 159.025 g / mol
အရည်ပျော်မှတ် 40.3 -82.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
XlogP2-AA ကို 2.3
(ကို C °) ဆူမှတ် 237-261
သိပ်သည်းဆ 1.29g / cm3
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2)
အဆိုပါဓာတုရဲ့နိုင်မှု 4.91e-4 mol / ဌမှ 2.57e-3 ပျမ်းမျှမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကအလွန်အမင်းပျော်ဝင်ကြောင်းပြသထားတယ်။
covalent ကပ်လျက်တည်ရှိယူနစ်အရေအတွက် 1
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2) တွက်ချက်ဂုဏ်သတ္တိများ
အမည်မသိနှောင်ကြိုး stereocenter ရေတွက် 0
compound calonicalized ဖြစ်ပါတယ် စစ်မှန်သော
Rotate နှောင်ကြိုးရေတွက် 0
အခိုးအငွေ့ဖိအား 1.20e-2 mmHg မှ 4.73e-2
သတ်မှတ်နှောင်ကြိုး stereocenter ရေတွက် 0
သတ်မှတ်ထားသောအက်တမ် stereocenter ရေတွက် 0
undefined အက်တမ် stereocenter ရေတွက် 0
အပူစီးကူး 135 MW / (ဍ * K)
မျက်နှာပြင်တင်းအား 34.4 dyn / cm41.6 မှ 3
ပစ္စည်းဥစ္စာနှစ်ခုအလွန်အမင်းအန္တရာယ်ရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများ 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile ပါရှိသည်။
သင်အမြဲ 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile နှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာလျက်ကိုရှောင်ရှားဖို့အကာအကွယ်ဂီယာပေါ်တွင်တင်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိပ်အငွေ့ဓာတ်များကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးရန်မျက်နှာဖုံးပေါ်တွင်တင်။ ရော်ဘာလက်အိတ်, မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အကာအကွယ်ဖိနပ်ကိုသုံးပါ။
အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကောင်းစွာအိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်, လေသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့်အငွေ့ပါးပျဉ်းတပ်ဆင်ထားကြောင်းအာမခံပါသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသင့်မျက်စိနှင့်ဆက်သွယ်လာလြှငျ, အကြောင်းကို 10 မိနစ်ဘို့ရေကိုအပြေး, အေးမြနှင့်အတူသတိသုတ်ခြင်း။ သငျသညျပိုမိုလွယ်ကူစပ်စွာဆေးဘို့မဆိုရတယ်လျှင်မျက်စိအဆက်အသွယ်ဖယ်ရှားပါ။ အဆိုပါယားယံဆက်ရှိနေသေးလျှင်, သင်တို့ကိုဆရာဝန်တစ်ဦးထံမှအကူအညီရှာသောအကြံပြုချက်များဖြစ်ပါတယ်။
သားကောင်အလုံအလောက်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေနှင့်အတူဧရိယာဖို့ဓာတ်ခွဲခန်းပြင်ပမှာယူရပါမည်။ တစ်ဦးချင်းစီအသက်ရှူအခက်အခဲများကြုံနေရသည်ဆိုပါကအတုအောက်စီဂျင်ထောက်ခံမှုစီမံခန့်ခွဲကြိုးစားကြနှင့်ဤပျက်ကွက်လျှင်, အစာရှောင်ဆေးကုသရှာကြာလော့။
ထိုခဏခြင်းတွင်သန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့အပျော့စားဆပ်ပြာစာရေးနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့သုတ်ခြင်း။ သင်၏အဝတ်များလွန်းကဆက်သွယ်လာလျှင်, လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုပယ် ယူ. အဝတ်လျှော်မတိုင်မီသူတို့အပေါ်မှာမထားကြဘူး။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးပါလျှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြာလော့။
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သောအခါ, အောက်ပါဆောင်ရွက်ချက်များဆင်ခြင်ကြလော့
မျက်နှာဖုံးများအပါအဝင်အကာအကွယ်ဂီယာ, လက်အိတ်, ဖိနပ်, မျက်မှန်ဝတ်ဆင်
အဆိုပါယိုဖိတ်မှုဖွင့်ရေမစိမ်ခင်အသက်ရှူကိရိယာ, impervious လက်အိတ်များနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်နဲ့တူအကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင်။ အရည်စုပ်ပစ္စည်းအားမရသဖြင့်အရပျကို clean up နှင့်စွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာထဲသို့သွင်းထားလေ၏။ ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့လျှော်ကြောင့်လေခတ်။ ထိုခဏခြင်းတွင်ရေအများကြီးနှင့်သင်၏အသားအရေဆေးကြောပါ။
ပစ္စည်းဥစ္စာလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဖြစ်ပြီး, သငျသညျ, ထို့ကွောငျ့, သင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမီးသတ်ဘူးရှိကြောင်းသေချာသင့်ပါတယ်။ မီးဖြစ်ပွား၏အမှု၌, သင်ကချွတ်ပယ်ရန်ကြိုးစားနေရှေ့မှာအကာအကွယ်အဝတ်ရှိသည်အာမခံပါသည်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, အရက်, ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်သို့မဟုတ်ပေါ်လီမာရေမြှုပ်ကိုသုံးပါ။
အလွန်အကျွံထိတွေ့ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မီးတောက်, အပူသို့မဟုတ်စက်နှိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းဘာမှကနေကွာထားပါ။ ကွန်တိန်နာတင်းကျပ်စွာပိတ်ထားဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ဦး, အေးမြခြောက်သွေ့ကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ဧရိယာထဲမှာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရှောင်ရှားဖို့ကောင်းစွာလုံခြုံရာဌာန၌သော့ခတ်။
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2) တည်ငြိမ်ရေး
ဒီထုတ်ကုန်အားကောင်းတဲ့ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များအားအက်ဆစ်နှင့်ဘေ့စတွေနဲ့ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖလိုရိုက်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်သည့်အခါလည်း, ကအန္တရာယ်ရှိသောနှင့်နာကျင်ကျိန်းစပ်အငွေ့ထုတ်လုပ်ရန် decomposes ။
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2) ရှင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာအားလုံးဒေသခံများနှင့်ဖက်ဒရယ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများ, ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုစောင့်ရှောက်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံသိပ္ပံပညာရှင်များသုတေသန, အသက်နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ဓာတုပေါင်းစပ်, analysis နှင့် Chromatography ပါဝင်သောအားလုံးဒေသများရှိ excel
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile (796600-15-2) သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဓာတုပေါင်းစပ်ဘို့တင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤထုတ်ကုန်၏ကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပမာဏကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာကြသည်ဆိုပါက, ကြင်နာစွာအမိန့်နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွေခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem ၏အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile, ကဏ္ဍများ 1-7 ။
သူ Carl အယ်လ်ယော, ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်၏ Thermophysical Properties ကို, စာမျက်နှာ 300-320 ။
ဒါဝိဒ်သည် R. Lide, စီအာစီစာနယ်ဇင်း,9မတ်လ 1995, ဓာတုဗေဒနှင့်ရူပဗေဒ၏စီအာစီလက်စွဲစာအုပ်: တစ်ဦးကဓာတု၏အသင့်ဖြစ်ပြီလား-ရည်ညွှန်းစာအုပ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dat, စာမျက်နှာ 1132-1456 ။